ခေါင်းစဉ်မရှိပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ခေါင်းစဉ်မရှိပါ
- Min Soe
Posted by Min Soe on Jun 20, 2012 in Copy/Paste |6comments
(လွန်ခဲ့သည့် (၆)လခန့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလက ရေးသားထားပြီး ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်နှစ်စောင်ထံသို့ (၅)လခန့်ခြားပြီး ပေးပို့ခဲ့သည့် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ အယ်ဒီတာများ မကြိုက်သဖြင့် အရွေးမခံရသော်လည်း ကိုယ့်ရင်သွေးသဖွယ်ဖြစ်နေသော ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်များကို ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးလေးမို့ မပစ်ရက်နိုင်ပါ။ ယခု အွန်လိုင်းမီဒီယာပေါ် တင်ခွင့်ရပြီဖြစ်လို့ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ရေးသူ၏ အားနည်းချက်သာဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အတွေးတစ်စဖြစ်လိုဖြစ်ငြား စေတနာမှန်ကိုတော့ မှန်းဆနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။)
သူကပြောသည် “အခု လေးလနဲ့ အပြီးဆောက်မယ်ပြောတော့၊ ပြီးနိုင်ပါ့မလား လူတွေက ပြောကြတယ်။ ပြီးပြီပဲထားပါ၊ ဒီတံတားရဲ့ ခိုင်ခံ့မှုကို ဘယ်သူက တာဝန်ယူမှာလဲ။ တစ်ခုခုဖြစ်လို့ ထိခိုက်မှုတွေရှိလာရင်ဘယ်သူတာဝန်ယူပေးမှာလဲ။ ကျွန်တော်ကပဲ ဆန္ဒစောနေသလားတော့ မသိပါဘူးဗျာ။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ… ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ မိတ္တူကူးဆိုင် တစ်ဆိုင်၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း ကိုယ်တိုင်မိတ္တူကူးပေးနေသူတစ်ဦး၏ ခံစား ချက်များ ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်တစ်ဦး၊ နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ဟန် တူပြီး၊ အနည်းငယ်ဝနေသည့် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့် ရေစီးကြောင်းနှင့် လိုက်ပါစီးမျှောနိုင်သူတစ်ဦး မဟုတ်မှန်း‌တော့ သူ၏ စကားအသွား အလာကို ကြည့်ပြီး မှန်းဆ၍ ရသည်။
သူဆိုလိုသည့် ဂုံးကကျော်တံတားများ၊ မိုးပျံရထားများ တည်ဆောက်မည့် အစီ အမံများသည် လတ်တလော မီဒီယာမျက်နှာစာများတွှင် အတွေ့များနေသည့် အကြောင်းအရာ များ ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်က သတင်းအဖြစ်သာ ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့် သုံး သပ်ချက်များ ရေးသားကြသည်ကိုမတွေ့ရသေး။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ တော်တော်များများ စဉ်းစားမိသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခု စတော့မည်ဆိုပါက Project Appraisal ဆောင်ရွှက်ရမည်။ ပြီးတော့ Project Evaluation ဆက်ပြီး ဆောင်ရွှက်ရမည်ကို သိထားသည်။ အချို့ကလည်း Feasibility Studies များ ဆောင်ရွှက်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
စဉ်းစားမိသည့် ပထမဆုံးအချက်ကတော့ ဒီစီမံကိန်းတွေ ဆောင်ရွက်ရသည့် ရည် ရွယ်ချက် တစ်နည်းအားဖြင့် ဂုံးကျော်တံတားတည်ဆောက်ရေးများ လုပ်ဖို့လိုသလားဆိုသည် ပင်။ ယခုဆောင်ရွှက်မည့် ဂုံးကျော်တံတားစီမံကိန်းသည် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အခက်အခဲ များ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်ခြင်းဟု ယူဆပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယခုဂုံးကျော်တံတား စီမံကိန်းဆောင်ရွှက်မည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ယာဉ်အစီးရေ စုစုပေါင်း မည်မျှရှိပါသလဲ။ အသွား အလာအများဆုံး၊ ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်းချိန်တွှင် ယာဉ်အစီးရေမည်မျှ လမ်းပေါ်ရောက်နေပါသလဲ။ ဂုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်မည့် လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ တာမွေနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံများတွှင် ကားအစီးရေ အများဆုံး မည်မျှရှိတတ်ပါသလဲ။ အဆိုပါ လမ်းဆုံများ ကို ဖြတ်သန်းဖို့ အချိန်မည်မျှ ကြာပါသလဲ စသည်များကို အခြေခံပြီး၊ ယခုစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် သင့်/မသင့် (သို့မဟုတ်) အကန့်အသတ်နှင့် လိုအပ်သည့်နေရာတွင်သာ ဆောင်ရွှက်ရန်တို့ကို စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွှက်ရန် ထိုက်တန်သလား ဆိုတာလည်း စဉ်းစားရမည့် အချက်တစ်ချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒီစီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်မည့်အစား လက်ရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံကို အဆင့်မီစေရန် ပြုပြင်ခြင်းကို ဦးစားပေးသင့်သလားဆိုတာ ထည့်သွှင်း စဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ စီမံကိန်းများအပြင် အခြားရွေးချယ်စရာများ ရှိသေးသလား ဆို သည်မှာလည်း စဉ်းစားစရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ လမ်းအပေါက်အပြဲများကို ပြုပြင်ခြင်း၊ လမ်းနယ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် စနစ်တကျ ဖြစ်စေရန်စီမံခြင်း၊ နေ့စဉ်ခရီးသွှားများ အတွှက် ရှိသင့်သည့် ယာဉ်အရေအတွက်အောက် များစွာလျော့နည်းနေသည့်အပြင် အဆင့်နိမ့်ကျလျှက်ရှိသည့် ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း၊ မြို့ပတ်ရထားပို့‌ဆောင်ရေးစနစ်ကို အမှန်တကယ် ထိရောက် အောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အထပ်မြင့် ယာဉ်ရပ်များစခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း စသည်တို့ဖြင့် လက်ရှိယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးရည်ရွှယ်ချက် အောင်မြင်စေရန် ဂုံးကျော်တံတားများ တည် ဆောက်ခြင်းထက် အဖိုးနည်း ၀န်ပါ ထိရောက်မှုရှိသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ရရှိလာ မည်ဟု ယူဆသည်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဆင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ယာဉ်များကိုပင် မီးစိမ်းပြထား ပြီး ဖြတ်သန်းစေကာ ကျန်ယာဉ်ကြောများကို စောင့်ဆိုင်းစေသည့် မျှတမှုမရှိသော ယာဉ်ကြောထိန်းစနစ်များ ကျင့်သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ယာဉ်ကြောထိန်း အချက်ပြမီး အားလုံးကို အလိုအလျောက်စနစ် အသုံးပြုပြီး ကြီးကြပ်ခြင်း၊ ယာဉ်လုံးဝမရပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ဖြူနီကျားနေရာများတွှင် မည်သည့်ယာဉ်မှ ရပ်တန့်ခြင်း မပြုခြင်း (ဥပမာ- တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်ရှိ တက္ကသိုလ်ရှေ့)၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်း စည်းကမ်း လိုက်နာစေရန် ကျောသားရင်သား မခွဲဘဲ ကြပ်မတ်ခြင်း စသည်တို့လည်း ဆောင် ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ အလားတူ မိုးပျံရထား တည်ဆောက်ခြင်းအစား လက်ရှိ မြို့ပတ်ရထား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးအမြတ်များ အပါအ၀င် အားလုံး အိုးနှင့်ဆန် တန်ရုံမျှသာရှိသည့် အစီအမံများကိုလည်း ထည့်သွှင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ (မြို့ပတ်ရထား အဆင့်မြှင့်ချင်ပါက ဘူတာများကို အဆင့်မြင့်ဈေးကြီးများ၊ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများသဖွယ် အဆင့်မြှင့်ခွင့် ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရရှိလာပြီး အလုပ်ဖြစ်နိုင်မည်ဟုလည်း ယူဆပါသည်။)
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ္ဍ၊ နည်းပညာအဆင့်အတန်း၊ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအရေအတွက် စသည့် အဓိကရင်းမြစ်များကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွှင် မှားယွင်းသောနေရာ၊ မဖြစ်သင့်သောကဏ္ဍတို့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမိပါက မိအေးနှစ်ခါနာ သကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်သည့် လူမှုစီးပွားဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ ဖြစ်သင့်သည့် ပြည်သူတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့လည်း နှောင့်နှေးနိုင်သည်ကို သတိပြုရမည်ဟု ယူဆပါသည်။ဖိနပ်နှင့်ခြေထောက် တော်မတော် မတိုင်းထွှာဘဲ ၀ယ်မိသည့်ဖိနပ် သေးငယ်နေသဖြင့် ဖနောင့်ကို ဓားဖြင့်လှီးရမည်လား။ ဖိနပ်ကြီးနေ၍ အ၀တ်ပတ်၍စီးရမည်လား ဥပမာကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန် စီမံကိန်းတိုင်းကို Master Plan၊ Overall Plan များဖြင့် ခြုံငုံစဉ်းစားသင့်သည်။ စိတ်ကူးပေါက်၍ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်စေမည့်အစား၊ ရေရှည်ကိုတွေးပြီး ပညာရှင်တို့၏ အကြံဉာဏ်များ၊ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံသင့်ပါသည်။
About Min Soe
Min Soe has written2post in this Website..
View all posts by Min Soe →
နေ.စဉ်တိုးပွားလာနေသော ယာဉ်အရေအတွက်များအရ ဂုံးကျော်တံတားတွေလဲ တည်ဆောက်ဖို. လိုအပ်တယ် ထင်ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံကို အဆင့်မီစေရန် ပြုပြင်ခြင်းနဲ. နေ့စဉ်ခရီးသွှားများ အတွှက် ရှိသင့်သည့် ယာဉ်အရေအတွက်အောက် များစွာလျော့နည်းနေတာအတွက် ခရီးသည် သယ်ယူ ပို.ဆောင်ရေးအစီအစဉ်တွေ ထပ်စီစဉ်ပေးတာလဲ တပိုင်းပေါ.နော်။ M R T လိုမျိုး မလုပ်ပေးနိုင်သေးတောင် ko min soe ပြောသလို တခြားနည်းလမ်းတွေ စဉ်းစားပေးသင်.ပါတယ်။
အထပ်မြင့် ယာဉ်ရပ်များစခန်းများ ဆောက်လုပ်ပေးတာကတော. လက်ရှိယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု အခက်အခဲကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါမျိုးတွေ အခုကတည်းက စလုပ်သင်.နေပါပြီ။
ယာဉ်ကျောကျပ်တဲ. နေရာတွေမှာ ယာဉ်လုံးဝမရပ်ရန် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးသင်.ပါတယ်။
အကောင်းမြင် အကျိုးမျှော် နည်းပေးလမ်းပြ စာတစ်ပုဒ်သာပ ။
MG ကို သိတာ အသိနောက်ကျသွားတယ် လို့ ထင်နေမယ် ထင်တယ်နော် .. ကြိုဆိုပါတယ် ။ :grin:
Min Soe says:
မန့်သူများအပါအ၀င် မန်းက မင်ဘာများအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်အပ်ပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော်စာမူပို့ထားတဲ့ ဂျာနယ်ထံမှ ယခုလိုပြန်ကြားလာပါတယ်။
ECOVISION JOURNAL ecovisionjournal@gmail.com
12:42 PM (22 hours ago)
ဆရာ့စာမူကို The Messenger News Journal , Vol.3 No.4 တွင်ဖေါ်ပြထားပြီးပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ ဒိစာ ဖတ်ဖူးပါတယ် တွေးနေတာ၊ ဂျာနယ်ထဲ ပါပြီးပါပြီ၊ သဘောကျ ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တွေကတော့ ရေးပြီးသား ရိုက်ရမှာကိုပဲ တစ်နှစ်လောက် အချိန် ယူရမယ်ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့် အားပေးတာပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ